Sidee loo hagaajin karaa boggaaga LinkedIn si sahal ah Video2Brain?
Posted by Tranquillus | Feb 3, 2018 | Tababarka internetka
Video2Brain: madal ku habboon oo si fudud loogu hagaajin karo astaantaada 'LinkedIn' iyo (ugu dambeyntii) looga helo xirfaddaada xirfadeed dhulka
Ma taqaan Video2Brain? Mashruucan tababarka ah ee khadka tooska ah wuxuu ku barayaa, adigoo adeegsanaya casharro fiidiyoow ah, sida loo isticmaalo softiweerka ugu muhiimsan si kor loogu qaado CV-gaaga. Haddii aad tahay naqshadeeye garaaf ah, naqshadeeye websaydh, barnaamij-yaqaan, waxaad dooneysaa inaad wax ka barato softiweerka xafiiska, Video2Brain ayaa ku siin doonta fursad aad ku raacdo tababar ku habboon, oo ku habboon ujeeddooyinkaaga xirfadeed.
Waa maxay Video2Brain?
Video2Brain waa barmaamij caqli badan oo MOOC hadda ah, laakiin shaki kuma jiro inaan wax badan ka maqli doono dhowaan. Waad ku mahadsan tahay sumcadda la-hawlgalayaasheeda (LinkedIn iyo Adobe), waxay dhawaan noqon doontaa tixraac ku saabsan waxbarashada masaafada dhijitaalka ah. Xaqiiqdii, dhammaan koorsooyinka waxaa dhiirrigeliya LinkedIn Learning, halka Adobe uu ka dhigay mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasheeda rasmiga ah. Video2brain.com ayaa sidaas darteed noqon doonta mid ka mid ah magacyada ugu waaweyn liiska ugu wanaagsan ee ku hadla luuqada Faransiiska ee MOOCS ee barashada isticmaalka softiweerka Adobe.
Waxyaabaha ku jira dhammaan koorsooyinka la heli karo waxay ku saleysan yihiin fikirka casharrada fiidiyaha. Koorso kasta waa dhakhso badan oo xiiso leh si loo wanaajiyo waxbarashadaada iyada oo aan waqti lumin. Video2Brain waxay bixisaa koorsooyin ku saleysan sedex mowduuc oo muhiim ah: Teknolojiyada, Hal abuurka iyo Ganacsiga. Marka si dabiici ah ayaan u helnaa koorsooyinka mawduuca naqshadda dijitaalka iyo sawirrada. Laakiin taasi maahan! Koorsooyinka qaarkood webku waxay la xiriiraan aqoonta lagama maarmaanka u ah xirfadleyaasha oo dhan, waxkastoo ay yihiin qaybtooda: Maareynta ama Suuqgeynta tusaale ahaan.
Ka faa'iideysiga sumcadda LinkedIn ee adduunka xirfadeed
Markaad booqanayso goobta ugu horaysa, waxaad u maleyneysaa in LinkedIn uusan si fudud u haysan Video2Brain. Xiriirka u dhaxeeya labadan noolaha ayaa ah mid jahawareer leh, nuuankuna wuu yar yahay. Run, Video2Brain.com iyo "saafi ah LinkedIn", laakiin waxaa si fudud loo taageeray midaan. Dhab ahaantii, Barnaamijka LinkedIn Learning Platform wuxuu bixiyaa dhammaan wixii ka sarreeya diiwaaniyeyaasheeda intarnetka ee ay u arkaan inuu yahay tayo sare. Sidaa darted waxay kaliya kor u qaadayaan Video2Brain maxaa yeelay waxay u arkaan in ay tahay MOOC oo la isku halleyn karo oo halis ah.
Sida haddii Xayaysiin this ma ahaa ku filan, oo dhan afjaridda shahaadooyinka manhajka la ansixiyey in la muujiyaa doonaa shabakadda professionnel.Il cad in shahaado caddaynaysa in aad ogaato qaababka lagama maarmaanka ah ee dhan software lagama maarmaanka ah ka dhigi doonaa faraqa u dhexeeya shakhsigaada iyo kan kale ee musharax ah. Mowduuc kale oo muhiim ah: dhammaan barnaamijyada la heli karo waxaa lagu calaamadiyey LinkedIn Learning. Tani waa mid aan qiimeeyneynin meelaha kale.
Tababar guud oo ku saabsan softwareka ugu muhiimsan ee kombuyuutarka.
Guud ahaan, waxaa jira 2 koorsooyin tababar oo dhameystiran oo ku saabsan Video1400Brain oo u adeegsada in ka badan 45 fiidiyow ahaan maaddo koorso ah. Kuwani waxay u kala baxaan saddex qaybood oo kala duwan: Ganacsi, Hal-abuur iyo Teknolojiyad. Sidaa darteed bartuhu wuxuu si fudud u dooran karaa mowduuca uu doonayo inuu ka shaqeeyo mudnaantiisa.
Koorasyada "Wax-abuurka" ayaa gaar ahaan loogu talagalay naqshadeeyayaasha garaafka iyo websaydhayaasha. Waxay baran karaan aasaaska si ay u habeeyaan barnaamijka muhiimka ah ee qaybahaas sida Photoshop, InDesign ama Illustrator. Marka laga reebo tababarka farsamada ee lagama maarmaanka u ah barnaamijka sare, koorsooyin dhamaystiran ayaa sidoo kale la siiyaa si loo horumariyo dareenka farshaxanka ee ardayda. Waxay kale oo ay bartaan, sidoo kale, inay xiiseynayaan faahfaahinta colorimetric ee sawir ama sawir-qaadista, si ay u bartaan aqoontooda adduunka ugu fiican.
READ Maxicours: tixraaca bixinta umeerinta internetka raqiis ah
Habka barashada xiisaha iyo isdhexgalka, oo loo habeeyey heerar kasta
Ku saabsan qaybta "Farsamada" laga helay Video2Brain, waxay isu keentaa barashada takhasuska ugu badan ee IT. Waxaan u maleyneynaa tusaale ahaan halkan barnaamijyada iyo horumarinta webka. Mar labaad, xitaa haddii tani ay tahay aqoon u muuqata inay adag tahay in la helo, barashada Video2Brain waxay ka caawin doontaa jahwareerka badan in la bilaabo.
Waad ku mahadsan tahay qaabka fiidiyowga, bartayaashu waxay baran karaan luuqadaha farsamada barnaamijyada ugu badan ee farsamo iyo is-dhexgal. Sidaa darteed, waxay leeyihiin, dhammaadka waxbarashadooda, khibrad dhab ah oo ay uga mahadcelinayaan tababbarka loo diyaariyay. Sidaas darteed, Video2Brain wuxuu kordhin karaa fursadahaaga si aad u hesho shaqo la xidhiidha (ama aan lahayn) aduunka oo dhan.
Dhammaan aqoonta si ay u bartaan si ay u kala soocaan musharrixiinta kale
Inta badan koorasyada ay bixiso Video2Brain waxay diiradda saarayaan xirfadaha dijitaalka ah. Si kastaba ha noqotee, qaybta "Ganacsiga" waxay leedahay mudnaanta faa'iido u leh xirfadaha kala duwan. Xaqiiq ahaan, shahaadooyinka qaybta ayaa faa'iido u leh shaqooyin badan oo aan lahayn wax kombiyuutar.
Waxaan ku ansixin karnaa shahaadooyin si loo aqoonsado xirfaddiisa xirfadeed ee qalab xafiiseed (gaar ahaan xirmada Microsoft). Tani markay dhamaystirto aqoonteeda oo ku saabsan helitaanka software-ka. Fasallada suuqgeynta ayaa sidoo kale la bixiyaa. Sidaa darteed, waxaad haysataa fursad aad ku kordhisid CV-gaaga xirfadaha muhiimka ah ee xirfad kasta.
Xaqiiqdii dhabta ah ee xirfaddaada xirfadeed
Haddii ay tahay shaqaale xor ah ama shaqaale, Video2Brain waa fursad gaar ah si aad xirfad uga hesho dhulka. Intaa waxaa dheer, waxaad baran doontaa in aad ku korodho sifooyinka muhiimka ah ee softwareka ugu muhiimsan ee taariikhda digital. Barashada fiidiyowga waxaa loogu talagalay inay noqdaan kuwo cad oo si sahlan loo fahmo. Tani waa inay macallimiintu wax u baraan dhammaan dadka.
READ Xarunta Tababarka Geela
Dhinaca kale, waa in la ogaadaa inaad ku tijaabin karto barashada 'LinkedIn Learning' bilaash qaab tijaabo ah. Tani waxay ku siin doontaa inaad marin u hesho gabi ahaanba buugaagta Video2Brain oo bilaash ah muddo bil ah. Tani waa fursada ugufiican ee lagu tijaabiyo ergonomiyada barxada iyadoo la kashifayo shahaadooyin bilaash ah oo kaliya hagaajin kara ku-xirnaanshaha manhajkaaga waxbarasho. Markaa ma jiraan wax lumaya, iyo wax kasta oo laga kasbado.
Sidee loo hagaajin karaa boggaaga LinkedIn si sahal ah Video2Brain? Janaayo 6th, 2020Tranquillus
horeHagaha Habboon ee Habboon ee Barashada Isbaanishka
socdaKoorsooyinka Lacagaha Ah Iyo Dhammaan Mawduucyada
Baro inaad ku madadaasho SKILLEOS, e-learning madal
Xarunta Tababarka Geela